Sifuna ukuyiwina le nkomishi: OweChiefs | News24
Sifuna ukuyiwina le nkomishi: OweChiefs
Cape Town – Umgadli weKaizer Chiefs obevutha engabaselwe, uGustavo Paez, usindise iqembu lakhe emlonyeni wengwenya ngesikhathi lijikela i-Acornbush United esiswini njengotshwala emdlalweni womqhudelwano weNedbank Cup last 16 enkundleni yezemidlalo, iKabokweni Stadium.
“Lena yiwini ebaluleke kakhulu ekilabhini,” lo mdlali ucashunwe esho kanjalo ku-website yaleli qembu.
“Sibonile ukuthi isikhathi asikho ngakuthina ngokuqhubeka komdlalo, bekumele ukuthi senze into ehlukile ukunqoba lo mdlalo.”
Yize noma iChiefs ibize kabi ngasekuqaleni komdlalo kodwa iqembu ebelidlalela ekhaya libe nokuzethemba ngokuhamba komdlalo nalapho ligcine khona lilivalele enetheni ngesiwombe sokuqala.
Bese kubukeka sengathi leli qembu elincane lizozigojela lezi zinkunzi zaseSoweto njengoba beseliqala ukuqinisa emuva, kodwa-ke uPaez ubesenezinye izinhlelo njengoba evele waqhamuka namagoli amabili asheshayo.
OLUNYE UDABA: UModise uqinisekise ukuthi uzoyishiya iSundowns
“Umqeqeshi wenze izinguquko ezidingekayo ngesikhathi silandela emuva,” kusho lo mdlali waseVenezuela, ephawula mayelana nokungena kwakhe kanjalo nokozakwabo, uHendrick Ekstein kanye noWilliam Twala.
“Futhi lokho kube ukushintsha kwezinto kuthina. Besingafuni ukuya esikhathini esengeziwe kanye namaphenathi, ngoba lokho bekuzoba wumdlalo we-lotto.
“Sifuna ukuyiwina le nkomishi. Kodwa-ke, siyithatha kancane, kancane, futhi umdlalo ngamunye.”
Kodwa-ke lo mdlali uyakhala ngezimo abebedlala ngaphansi kwazo kule nkundla ebigcwele phama.
“Izimo zebhola zenze ukudlala ibhola kube nzima. Inkundla ibiqinile kanti nokushisa bekucishe kungabekezeleleki,” kusho uPaez.